BUDDHIST TERMS' Dictionary: DEPENDENT CORPOREALITY - ဥပါဒါရူပ
DEPENDENT CORPOREALITY - ဥပါဒါရူပ
DEPENDENT CORPOREALITY Upᾱdᾱrῡpa
ဥပါဒါရူပ - ဥပါဒါရုပ်၊ မဟာဘုတ်ကြီးလေးပါးကို အမှီပြု၍ ဖြစ်သောရုပ်။
ဥပါဒါရုပ်သည် ၂၄-ပါးရှိသည်။ ထို ၂၄-ပါးသော ရုပ်တို့သည် ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို အမှီပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြရ၏။
Corporeality dependent on the four primary elements.
There are twenty-four kinds of dependent corporeality. They arise dependent on the four primary elements.